Kuphinde kwaqansa kwiPirates idedela iGalaxy isiyibambe ngobhongwane - Impempe
Kuphinde kwaqansa kwiPirates idedela iGalaxy isiyibambe ngobhongwane
TS Galaxy (1) 1
I-Orlando Pirates idedele inyamazane seyiyibambile iphunyukwa amaphuzu amathathu ngemuva kokuthi umdlalo wayo weDStv Premiership neTS Galaxy uphele zibambene ngo 1-1, okuwumphumela ongemuhle kwiBucs kwazise beyisekhaya yona.
IBhakaBhaka liwuqale kahle lo mdlalo lithembisa ukuthi lizowawola wonke amaphuzu ngesikhathi lishaya igoli kusaphele imizuzu engu-11 umdlalo uqalile. UBongani Sam nguyena okhombise ozakwabo ukuthi bazele ukuzokwenzani enkundleni ngesikhathi eshaya igoli lokuqala.
Empeleni iqale ngomzuzu wesithathu iBucs ukukhombisa ukuthi kukhonya yona e-Orlando Stadium ngesikhathi uFortune Makaringe ededela ishodi elibhekise emapalini eRockets futhi ibhola lakhe laceza kancane.
Ngomzuzu ka-14, uMxolisi Macuphu ubethi uyayibuyisela emdlaweni iGalaxy, kodwa wafica uRichard Ofori ebhekile, walochitha ibhola lakhe. Nokho lugcine lugobile kule nsizwa yaseGhana ngomzuzu ka-20 ngesikhathi uMasilake Phohlongo engqofela phakathi ibhola ebeligotshwe ngobuchule nguLuckyboy Mokoena ngakwesokudla.
IPirates ibe seyiphonsa yonke into kwiGalaxy ngethemba lokuthi kukhona engakuzuza kodwa kwaba nhlanga zimuka nomoya, imizamo yoThembinkosi Lorch, Makaringe noDeon Hotto yangaba nambuyiselo.
Nasesiwombeni sesibili bezisahubhana kodwa kwasho khona ukuthi cishe bekudaliwe ukuthi kumele kucazelwane amaphuzu, iqembu ngalinye lithole elilodwa.
IBucs iqhubekile nokucindezela izama ukukhombisa izivakashi zayo ukuthi azikwazi ukufika zizitamuzele iphuzu kalula kanjalo nje, kodwa kwala khona ukwenza. Umdlalo ugcine uphele zibambene ngo 1-1 lowo.
Previous Previous post: Iphinde yenqaba namaphuzu iBaroka ibamba iChiefs
Next Next post: Uphinde isenzo esamqhatha nomqeqeshi weSwallows uMokoena weDowns